China 8 Axis Robotic Welding Workstation neVaviri Positioner Manufacturer uye Supplier |Yunhua
Iyi gadziriso yakagadzirirwa yakaoma basa chidimbu welding kana kushandiswa kune maviri marobhoti anoshanda chiteshi.
-More welding posture yekusangana welding torch
-Fast clamping ine maviri ekushanda chiteshi
Robotic Welding Workstation ine mbiri Positioner
Nzira yekuwedzera sei kushanda kwerobhoti?Wedzera imwe tafura yebasa ichava nzira inoshanda.Mushandi anozotora chidimbu chebasa pane imwe tafura yekushanda uku iro robhoti richizopinza pane imwe tafura yekushanda kuitira kuti robhoti igone weld chidimbu chebasa nguva dzose.
Yedu 8 Axis robhoti welding workstation ine mapositioners maviri ndeimwe yeyakajairwa workstation.Iyo yekuwedzera yekunze axis inogona kuwirirana nerobhoti kuitira kuti robhoti ipedze imwe yakaoma application.Aya maviri mapositioners anogona zvakare kunzi tafura yekushanda uye anogona kudzorwa neremote control bhokisi.Kamwe mushandi apedza basa rekugadzirisa uye dzvanya remote control bhokisi.Robhoti ichaenda kune iyi weld tafura welding mushure mekupedza iyo yapfuura.Tinokwanisa kubatanidza torch yakachena chiteshi icho chinobatsira pawelding torch.
8 Axis robhoti yekushanda chiteshi
Robhoti ine maviri axis chinzvimbo
Hove scale welding performance
Wese mutengi anofanira kuziva YOO HEART robhoti yakanaka vasati vatenga.Kana vatengi vaine imwe YOO HEART robhoti, mushandi wavo achave ne3-5 mazuva emahara kudzidziswa muYOO HEART fekitori.Pachange paine wechat group kana whatsapp group, ma technician edu ano shanda after sale service, magetsi, hardware, software etc, anenge arimo. Kana dambudziko rimwechete rikaitika kaviri, technician wedu anoenda kucustomer company kunogadzirisa dambudziko.
Q1.Ndeupi musiyano weiyo positioner inodzorwa neplc uye nekutonga system.
A. Dambudziko guru nderekuti kana positioner inodzorwa nePLC, inogona chete kubva panzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo, robhoti haigoni kushanda pamwe nepositioner (synergy).paunenge uchishandisa control system, inogona kushandira pamwe neye positioner.Ehe, vane hunyanzvi hwakasiyana hwakaoma.
Q2.Nzira yekubatanidza auto-kugadzirisa tafura?
A. Iye zvino, tine 22input uye 22 zvabuda.Iwe unongoda kupa masaini kune electromagnetic valve.
Q3.Iwe une torch yakachena chiteshi munzvimbo yako yekushanda?
A. Tine chiteshi chemwenje chemwenje munzvimbo yekushanda.Chinhu chekusarudza.
Q4.Nzira yekubatanidza torch yakachena chiteshi uye mashandisiro ayo?
A. Uchawana manyoro echiteshi chemwenje chetochi.Uye iwe unongoda kupa masaini kune torch yakachena chiteshi uye ichashanda.
Q5.Ndeapi masaini anoda chiteshi chemwenje chemwenje?
A. Pane masaini angangoita mana anodiwa chiteshi chemwenje: masaini ekucheka waya, sigi yemafuta epfapfaidza, chiratidzo chekuchenesa, uye kuisa masaini.
Zvakapfuura: Laser welding robhoti
Zvinotevera: Sarudza Uye Isa Robhoti Zvinotsanangurwa - Kupenda robhoti - Yunhua
Abb Arc Welding Robot Mutengo
Yakarurama Arc Welding Robot
Arc Welding Robot Chikumbiro